Ao amin'ny Adobe Color izao dia afaka mamorona palitao loko Pantone | Famoronana an-tserasera
Manuel Ramirez | | Graphic Design, Inspiration
Mety tsy fantatrao akory Fitaovana web an'ny Adobe antsoina hoe Color, saingy omaly vao nanambara andianà fanavaozam-baovao ao amin'ny vavahadin-tserasera izay ahafahantsika mamoaka paleta miloko amin'ny sary avy amin'ny Adobe Stock na Behance.
Adobe Color dia fitaovana web mamela antsika mamorona paleta tonga lafatra amin'ny fisafidianana loko fototra ary ny fampiharana ny lalàna miloko izay ampiharin'i Adobe. Azontsika atao koa ny mamadika ny loha-loko misy antsika ho any Pantone swatches hisintomana ary hanana azy ireo avy eo.
Ny fanavaozana voaray ao amin'ny Adobe Color CC dia misy ny safidy hamoaka paleta miloko amin'ny Adobe Stock na Behance, safidio ireo galerin'ny fanoharana miorina amin'ny sary nalaza ary, farany, ny safidy hamadika ny loko ho an'ny pantone tone.
Ho an'ity dia azontsika atao ny mampiasa ilay fiasa vaovao antsoina hoe "Hizaha" ary isika mamela anao hamantatra marina loko. Eto i Adobe Sensei, Adobe's AI, dia niditra an-tsehatra mba hanolotra hoe iza ireo marika mety ho mora raisina, tsy amin'ny loko ihany, fa amin'ny alàlan'ny fikarohana karoka. Miresaka teny toa ny "faly", "alahelo" na hafa izahay.
Fampisehoana vaovao iray hafa azon'ny rehetra ao amin'ny Adobe Color ny "Trends." Ho eo am-pelatanantsika ny safidy an'ny midira galerià amin'ny sary voafantina avy amin'ny ekipan'i Adobe Stock sy Behance manokana momba ny famolavolana sary, sary ary lamaody.
Na dia ny tena manintona ny saintsika aza dia Fampidirana Pantone hahafahana mamadika paleta ho swatches Pantone ary afaka mampiasa amin'ny fitaovana Adobe izahay avy eo mba hamaritana andian-loko amin'ny asa famolavolana na ny fanondrotana tarehy izay tianay omena ny tranonkalantsika.
Afaka miditra izao ianao Adobe Color y manana fitaovana Internet hafa eny an-tananao izay hitadiavana an'io palette tonga lafatra io. Aza adino ity tendron'ny Adobe ity fandokoana iray-tsindry iray ao amin'ny Illustrator.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Adobe dia manavao ny fitaovany an-tranonkala amin'ny palety miloko antsoina hoe Adobe Color
Ity infographic ity dia mampiseho anao ny fomba hafa rehetra amin'ny programa Adobe Creative Cloud
Ilay doka Coca-Cola vaovao izay saika "henoinao"